Madaxweynaha Somaliland Oo Dadweynaha Ugu Baaqay Inay Is-garab-taagaan Ciidammada Dab-damiska
Hargeysa (Dhamays) – Madxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Silaanyo), ayaa Maanta ka qayb-galay munaasibad loo qabtay Ciidanka Dab-demiska Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu Madaxweynuhu halkaasi ka jeediyey khudbad kooban.
Munaasibaddan oo lagu Dhiiri-gelinayey Askar ka mid ah Ciidammada Dab-damiska oo ka soo kabtay dhaawacyo ay Shacab soo gaadhsiiyeen dhowr bilood ka hor, isla-markaana uu Madaxweynuhu Xadhigga kaga jaray Xarunta guud ee Ciidammada Dab-damiska ee Caasimadda Hargeysa, ayaa waxa qayb-galay Masuuliyiin tiro badan oo Xukuumadda ka mid ah, Taliyeyaasha Ciidammada kala Duwan ee Qaranka iyo Marti-sharaf kale.
Madaxweynaha oo Shahaado-sharafyo Guddoonsiiyey Askar ka mid ah Ciidammada Dab-damiska iyo Qaar ka mid ah Masuuliyiinta Xukuumadda iyo Dad kale oo Door ka qaatay dhismaha Ciidammada Dab-damiska, ayaa halkaa ka jeediyey Khudbad kooban oo dhinacyo badan taabanaysay, waxaanu yidhi “Ugu horayn sharaf weyn ayay ii tahay in aan kasoo qayb-galo munaasibadan xadhigga lagaga jarayo xarunta cusub ee loo dhisay Ciidanka dab-damiska isla-markaana tababarka loogu soo xidhayo ciidanka dhamaystay xirfadda dab-deminta iyo gargaarka koowaad. Waxaan hambalyo u jeedinayaa halyey-yada ciidanka dab-damiska ee dhamaystay tababarka u socday mudada lixda bilood ah. Sidoo kale waxaan si weyn u bogaadinayaa Taliyaha Ciidanka dab-damiska sareeye guuto Axmed Maxamed Xasan (Sawaaxili) oo si hagar la’aan ah ugu adeegay ummadiisa. Waxaan u mahad-naqayaa dhamaan madaxda iyo masuuliyiinta doorka weyn ka qaatay in qarankani yeesho agab iyo ciidan la dagaalama khatarta dabka, si gaar ahna waxaan u bogaadinayaa odayaashii taageerada la barbar taagnaa taliska ciidanka dab-damiska iyo maamulka dawladda hoose ee caasimadda, gaar ahaan duqa magaalada, mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid (Saltelco) oo kaalin mugleh ka qaatay hana qaadka iyo taabba-galka ciidanka dab-damiska caasimada.
Mudanayaal iyo Marwooyin, Alle mahaddii tan iyo intii aynu xornimaddeena helnay 26kii June 1960kii waxaynu markii u horreysay maanta yeelanay ciidan si gaara ula dagaalama khatarta dabka.
Dabku wuxuu kamid yahay dhibaatooyinka iyo aafooyinka ugu waaweyn ee ku gedaaman nolosha casriga ah ee magaalooyinka, kaasoo halis ku haya nabad gelyada bulshooyinka caalamka meel kasta ay joogaan.
Xukuumadda xisbiga KULMIYE, ee aan gadh-wadeenka ka ahay waxay xoogga saartay yagleelidda iyo dhismaha ciidan dab-damis in uu yeesho qarankani kadib markii aanu aragnay baahida weyn ee loo qabo iyo khasaaraha uu naf iyo maalba inoo geysto.
Waxaan kula dardaarmayaa ciidan weynaha loo tababaray xirfaddan dab-damiska inay u gutaan xilkooda si dedaal iyo daacadnimo leh. Uga dambayn waxaan shacabka Somaliland ugu baaqayaa inay is garab taagaan, isla-makaana gacan-siiyaan naftood hurayaasha ciidanka dab-damiska ee habeen iyo maalinba heeganka u ah sugidda nabadgelyada iyo la dagaalanka masiibada dabka…”
Previous: Somaliland Iyo Soomaaliya Oo Guddi U Saaray Soo Wareejinta Maamulka Hawada
Next: Magacyada 7 Qof Oo Ku Dhintay Shilal Ka Dhacay Gobollada Saaxil Iyo Gabiley